ညီလင်းသစ်: အာရုံများ ပျံသန်းရာ နိုင်ငံကလေးသို့ (၇)
Posted by ညီလင်းသစ် au 3.5.12
စောင့်လိုက်ရတာဗျိုး... post အသစ်တွေ့တော့ ဟေး ကနဲတောင် အသံထွက်မိတယ် :)
ကာတွန်းတစ်ပုံချင်းစီကို သေသေချာချာ ကြည့်ရှူလေ့လာခံစား သွားပါကြောင်း...
ဝန်းရံမှူနဲ့ ပြင်ဆင်မှူ ဆိုတဲ့ကာတွန်းလေးကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ..
“လူပျိုပေါက်ထဲကဖွင်.ထားတဲ.၀က်ဘ်ဆိုက်ဒ်ပါကွာ” ဆိုတဲ.ကာတွန်းနဲ. “တက်” ဆိုပြီးပြောနေတဲ.“အဘ”ရဲ.ကာတွန်း၂ကွက်ကို ကြည်.မိပြီး တယောက်ထဲ အသံအကျယ်ကြီးနဲ.အော်ရီမိလို. အိမ်ကအမျိုးသားကတောင် တအံ.တသြဖြစ်နေတယ်။
စားစရာတွေမပါလဲ ဒီလိုမျိုးတကွက်ထဲနဲ. တိုက်ရိုက်ထိတဲ. ကာတွန်းလေးတွေကြည်.ရတာလဲ ကျေနပ်ပါတယ်။ အရမ်းကိုအသံအကျယ်ကြီးရီလိုက်ရတာကိုလဲ ကျေနပ်သွားတယ်။ အထူးသဖြင်. “အဘ”ကာတွန်းကိုသိပ်ကြိုက်တာဘဲ။
ကျောင်းတက်တုန်းက တစ်ယောက်တည်းလောကနတ်ကလုပ်တဲ့ပန်းချီပြပွဲတွေသွားသွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ ကက်တလောက်လေးကိုင်ပြီး ပန်းချီကားနံမည်နဲ့ ပန်းချီကားကိုပုံဖေါ်တွေးရတာသိပ်သ ဘောကျတယ်။
အဘကချောက်ထဲကိုတက်ခုိုင်းတာသဘောအကျဆုံးဘဲ။ တွေးလေတွေးလေသဘောကျလေဘဲ။ ချောက်မှန်းသိသိနဲ့ တက်ခုိုင်းတာလည်းဖြစ်နုိုင်တယ်လေ။ ဆင်းလို့ ပြောရင်အားလျော့ သွားနုိုင်တယ်လေ။ ဟုတ်ဘူးလား။ ဒါမှမဟုတ်.....
သူကတက်ခိုင်းပေမဲ့သူကုိုယ်တုိုင်တော့အားလုံးကျသွား ချိန်မှာချောက်ထဲကို မတက်ပဲလည်းကျန်ခဲ့နုိုင်တာဘဲ။ အများကြီးတွေး လို့ ရတယ်နော်။
လောကနတ် တခါမှ မသွားဖူးဘူး.။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကာတွန်းဆိုတာထက် တန်ဖိုးရှိလိုက်တဲ့
ကာတွန်လေးတွေပါပဲ တွေးနိုင်ရင် တွေးနိုင်သလောက်
အတွေးကျယ်စေတဲ့ ကာတွန်းတွေ ကြည့်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးပါဗျာ
ဟိဟိ ဂျာရစ်ကိုလဲ ကိုရင်ဘဲနှိုးနေရတာ ဟိဟိး))
အဘ ကာတွန်း တက်ဆိုတာလေး သဘောကျတယ်။
အားလုံးက သူ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့သူ ပြည့်စုံနေလို့ပါ
ပီပီပြင်ပြင်ကာတွန်းလေးတွေကို ကြည့်ရှု ခံစားလိုက်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မောင်ညီလင်းရေ။
ကာတွန်းတွေ သဘောကျချက်ဗျာ.. တစ်ပုံချင်းစီကို စေ့စေ့တွေးကြည့်ရင် အဓိပ္ပါယ်တွေက အပြည့်ပဲ.. အားလုံးကို သဘောကျတယ်..း)))
တော့ အကိုပြောသလိုပဲ တကယ့်ကိုရဲရင့်ပါပေတယ်..။
ပြောမသွားတဲ့ ရုပ်ပြောင်တစ်ကွက်က ကျမ်းစာအုပ်
မလာသေးတဲ့ ကာတွန်းတွေ ဆူညံ၊ရှုပ်ထွေးလို့....
တစ်ခွန်းကလည်း အရာရာထက် သာလွန်သွားသလို
ဒီလိုထိမိတဲ့ကာတွန်းလေးတွေ မျှဝေခံစားခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးညီလင်းးးးး
ကယ်ရီကေးချားပုံတွေဆို သိပ်ကြိုက်တာ ဘဲ
ငယ်ငယ်တုန်းက စံရွှေမြင့်တို့ အရိုင်းတို့ ပြာဂလောင်ပြာလချောင်တို့ မိုက်မိုက်ပြည် တို့ ဆို သိပ်ကြိုက်ခဲ့တာ ရန်ကုန်ရောက်မှ ကာတွန်းဝယ်ဖတ်ဖို့ စာရင်းတို့ဖို့သတိရသွားပြီ ...
ကာတွန်းတွေ သဘောကျလိုက်တာ။ အဘနှယ် အဆင်းကြီး ဥစ္စာကို ဆိုတဲ့ နေရာရောက်တော့ မနေနိူင်တော့ဘူး အော်ရယ်မိတော့တယ်း))))
ကာတွန်းတစ်ကွက်တစ်ကွက်က တကယ်တွေးစရာတွေအများကြီးပေးနိုင်တယ်... ထိမိပါပေတယ်....။ ပြပွဲလေးလုပ်တာမသိလိုက်ဘူး... ကိုညီလင်းသစ်ပြန်မျှဝေမှပဲသိတော့တယ်... အဲလို အင်ဖော်မေးရှင်းကောင်းတာ...။ ကျေးဇူးပါ နောက်တစ်ပို့စ်ကိုစောင့်မျှော်နေပါ့မယ်...။
မဖတ်ရတာကြာတဲ့ကာတွန်းကောင်းတွေ ထပ်ဆင့် ဖေါ်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကာတွန်းတွေ.. ဘယ်ဟာကို အကြိုက်ဆုံးလို့တောင် မပြောတတ်ဘူး..
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်.. ကာတွန်းဆရာတွေရဲ့ ဥာဏ်ရည်နဲ့ သတ္တိကိုလဲ လေးစားပါတယ်
ပို့စ်တစ်ပုဒ် တင်ဖို့ ကြာကြာသွားတာ ကျနော်လည်း အားနာလှပါတယ်ဗျာ၊ စိတ်ရှည်ရှည်ထား စောင့်ဆိုင်းပြီး လာဖတ်နေတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ..၊း)
ကျနော်နဲ့ ကာတွန်းအကြိုက် တူနေပြီ၊း) ဟိုအရင် ပို့စ် တွေမှာ အစားအသောက် ဓါတ်ပုံတွေအကြောင်း ကွန်မန့်ပေးခဲ့တာ အခုဒီ ကွန်မန့်ပိုင်ရှင်ပဲနဲ့ တူတယ်..၊း)
မအိုင်အိုရာက အတော်လေးကို ဖြန့်ထွက်တွေး ပစ်လိုက်တာပဲဗျ..၊း) ဟုတ်တယ်နော်၊ အဲဒီကာတွန်းက အတည့်ကော၊ ပြောင်းပြန်ပါ တွေးလို့ရတယ်..၊
ပျောက်နေပါ့လား၊ ပြန်လာလည်တာ ဝမ်းသာတယ်ဗျာ၊
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ၊ တစ်ကွက်လောက် ရဖို့အရေး မလွယ်လှလို့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကာတွန်းတွေပါပဲ..၊
ဒါဆို ညီမတို့ဆီမှာတော့ ကြက်ဖတွန်လို့ မိုးလင်းတာ အမှန်ပဲ-လို့ ပြောရမယ် ထင်တယ်နော်..၊း)
ဟုတ်ကဲ့..၊ တကယ်ပဲ 'ထိ' တဲ့ ကာတွန်းလေးပါ..၊
ဟုတ်ပါတယ်၊ တမျိုးစီ ကောင်းကြတာ ပါပဲဗျာ..၊
ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ကာတွန်းပြပွဲကို ခေါ်သွားခွင့်ရလို့ ဝမ်းမြောက် မိပါတယ်ခင်ဗျား...၊
အမှန်ပါပဲဗျာ၊ တစ်ကွက်ကာတွန်း ပီသစွာနဲ့ပဲ အားလုံးက ကျစ်လစ်၊ စူးရှကြတယ်..၊
အံ့သြစရာဗျာ..၊ ကျနော်တို့ကြားမှာ တယ်လီပသီ တစ်ခုခုတော့ ရှိနေပြီ ထင်တယ်ဗျ၊ အဲဒီ အုန်းပင်နဲ့ကာတွန်းကို ပို့စ်မှာ တင်နေတုန်း 'အင်း ကိုညိမ်းနိုင်ဆို ဒီကာတွန်းများ ကြိုက်မလား မသိဘူး' လို့ တွေးမိခဲ့ သေးတယ်...၊း)
ကျနော်တို့ဟာ ခေတ်ပြိုင်တွေဆိုတာ သေချာတယ်ဗျ၊ မမီးငယ် ပြောတဲ့ ကာတွန်းတွေကို ကျနော်လည်း ဖတ်ခဲ့၊ နှစ်သက်ခဲ့ ဖူးတယ်..၊း)
အင်း.. ဒီကာတွန်းကတော့ အားလုံးရဲ့ ဟာဒယတွေကို သိမ်းကြုံးယူသွားတော့ တာပဲဗျို့...၊း)
မသိဆို ကြော်ငြာအားလည်း သိပ်ကောင်းခဲ့ပုံ မရလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊ ကျနော်လည်း ခရီးသွားဟန်လွဲ ကြုံခဲ့ရတာပါ၊ အင်ဖော်မေးရှင်းက မကောင်းပါဘူး..၊း)
တစုံတရာ နှစ်သစ်တယ်ဆိုရင်ပဲ ဝေမျှရတာ ဝမ်းသာ မိပါတယ်..၊
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကာတွန်းဆရာတွေရဲ့ အားထုတ်မှုနဲ့ ဖြတ်သန်းမှုတွေက တကယ်ပဲ လေးစားစရာပါ..။
like all cartoons. they are very brilliant.
" ပန်းဆိုးတန်း လမ်းမကြီးပေါ်မှာလည်း နံရံပေါ် ရောက်မလာသေးတဲ့ ကာတွန်းတွေ ဆူညံ၊ ရှုပ်ထွေးလို့..."
you are also very good writer.
you should write some traveling story books. I'll definitely buy it. :)
Love to read your post all the time.
likewise your comments.
Thank you fir sharing. They all are GRATE!!
လောကနတ်ကို ကိုယ်တိုင် ရောက်သွားသလိုပါဘဲ... ကာတွန်းလေးတွေ အားလုံးကို သဘောကျတယ်... လိုရင်းကို ထိမိအောင် ပုံဖော်နိုင်တယ်နော်....(ကိုယ်လို လူပြိန်းနားလည်အောင်)
ပြောင်မြောက်ထိမိတဲ့ ကာတွန်းလေးတွေ မျှဝေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုညီရေ
ကာတွန်းတွေ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိုက်တာ.. ကာတွန်းဆရာရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေက အံ့မခန်းပါဘဲနော်... တွေးလဲတွေးတတ်ကြပါပေတယ်။ ကိုယ့်ဖာသာဆို ဒီလိုပြပွဲတွေ ရောက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး. ခုတော့ကိုညီလင်းသစ်ကျေးဇူးနဲ့ စုံစုံလင်လင် မြင်လိုက်ရပြီ။ ကာတွန်းတွေအားလုံး အဓိပ္ပါယ် အပြည့်အဝဘဲနော်။ သဘောကျမိတယ်။
ကာတွန်း တကွက်ပြီးတကွက် စိန်ပြေနပြောကြည့်ရင်း တကယ့်ကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်ဗျာ။ မတင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကာတွန်းလေးတွေကို အဆင်ပြေတဲ့တနေ၇ာမှာတင်ပြီး ဝေမျှနိုင်ရင် အတိုင်းထက်အလွန်ပါပဲလို့ လောဘကြီးပါရစေ..
Though you posted cartoons in complete,someone cut or covered some parts of them in Mm.I can't see them all.They may want people in ygn to go Lawkanat:)
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကာတွန်းတွေ ကျေးဇူးပါကိုညီရေ
အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ကာတွန်းပုံလေး တွေ အတွက်ကျေးဇူးနော်
“ လူပျိုပေါက်ထဲက ဖွင့်ထားတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်ပါကွာ..ခုမှ ပွင့်တာဟ” ဆိုတဲ့ ကာတွန်းရယ်...
“ အဘနှယ် အဆင်းကြီးဥစ္စာကို ” ဆိုတဲ့ နှစ်ပုဒ် ထိတယ်ရျင်။ တကယ် မျက်မှောက်ခေတ်ကို ကိုယ်စားပြု ထင်ဟပ်စေတဲ့ ရေးချက်များပါပဲ။ ကာတွန်းဆရာများကို လေးစားမိသလို၊ ရန်ကုန်ရောက်ခိုက်အချိန်လေးမှာ ပြန်လည်မျှဝေပေးတဲ့ ကိုညီလင်းသစ်ကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် :)))
ကာတွန်းလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လောကနတ် ပြပွဲခန်းမလေးထဲကို ရောက်သွားခဲ့ရတယ်။
ကာတွန်းလေးတွေကလည်း ကောင်းသလို၊ အဲဒီ့ကာတွန်းလေးတွေကို တဆင့်ခံ တင်ပြခံစားပေးထားတဲ့ ကိုညီရဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျလေးတွေကလည်း ပြောင်မြောက်ပါပေတယ်။
နောက်ဆက်တွဲလေးတွေ မျှော်နေမယ် ဘရားသားရေ...
ကာတွန်းတွေကို အရမ်းသဘောကျမိတယ်။ တခုတ်တရ ရိုက်ယူလာပေးတဲ့ ကိုညီလင်းသစ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အပိုင်း ၈ မျှော်နေတဲ့အထဲမှာ ဇွန်လည်းပါတယ်နော်။း)